Telehealth - Falls चर्च स्वास्थ्य सेवा केन्द्र
तपाईंको अपोइन्टमेन्ट पहिले नै तालिकाबद्ध गरिएको छ?
के तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत भेटघाट निर्धारित गरिसक्नु भएको छ? तपाईं अझै पनि टेलिहेल्थ अपोइन्टमेन्ट अनुसूची गर्न सक्नुहुन्छ - जसले तपाईंलाई भिडियो वा टेलिफोनबाट तपाईंको अपोइन्टमेन्ट अघि हाम्रा एक बिरामी शिक्षकसँग तपाईंको गर्भपतन छलफल गर्न अनुमति दिनेछ। कृपया हामीलाई ईमेल गर्नुहोस् womanfirst@fallschurchhealthcare.com र हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाईं टेलिहेल्थ अनुसूची गर्न चाहानुहुन्छ।
Telehealth को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्न
टेलिल्थ भनेको के हो?
टेलिल्थ एक सुरक्षित, भर्चुअल अपोइन्टमेन्ट हो बिरामी शिक्षकहरू मध्ये एक भिडियो वा अडियो सम्मेलन द्वारा। टेलिल्थले तपाईंको मेडिकल हेरचाह अधिक सस्तो बनाउन र समय बचत गर्न सक्दछ।
Telehealth का कस्ता फाइदाहरू छन्?
Telehealth का केहि लाभहरु:
तपाईंको लागि अधिक सुविधाजनक समय र स्थानमा हेरचाह पहुँच गर्दै। टेलिल्थले तपाईंलाई हाम्रो एक बिरामी शिक्षकको साथ जडान गर्न अनुमति दिन्छ शारीरिक रूपमा हाम्रो केन्द्रमा हुनु भन्दा। तपाईं Telehealth तपाईंको घर वा अन्य कहीँबाट पनि पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, हाम्रो टेलिल्थ कार्यक्रमले बेलुकाको समयहरू समावेश गर्दछ।
अधिक आरामदायक वातावरणमा हेरचाह पहुँच। तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं हाम्रो बिरामी शिक्षकसँग कुरा गर्नुहुन्छ। चाहे यो तपाईंको घरमा वा साथीको घरमा, त्यहाँ एक समर्थन व्यक्ति तपाईंको साथ वा तपाईंको आफ्नै, तपाईं आफ्नो वातावरणमा निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। (साथै? यदि तपाईं आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले मास्क लगाउनुपर्दैन!
तपाईंको अफिस-अपोइन्टमेन्टमा हाम्रो अफिसमा कम समय खर्च गर्दै। औसतमा, Telehealth को उपयोग तपाईं हाम्रो केन्द्र मा हुनेछ को समय को मात्रा कम हुन्छ 90 मिनेट।
एक सुरक्षित आंशिक भुक्तानी (न्यूनतम $ १००) बनाउँदै वा क्रेडिट कार्ड अनलाईन मार्फत पूर्ण भुक्तान। कुनै पनि बाँकी रहेको शेष रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ तपाईंको व्यक्तिगत भेटमा। (यदि तपाईं बीमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको नीति जाँच गर्न सक्छौं र तपाईंको कभरेज र सह-भुक्तानको बारेमा तपाईंलाई सूचित गर्नेछौं।)
मेरो बिरामी शिक्षक र म टेलहिल्टको बखत के कुरा गर्दैछु?
बिरामी शिक्षक र तपाइँ तपाइँको बिरामी जानकारी फारमहरु, तपाईको मेडिकल सेवन फारमहरु सहित समीक्षा, र तपाईको व्यक्तिगत गर्भपतन हेरचाहको समयमा के हुन्छ समीक्षा हुनेछ। तिनीहरू त्यहाँ तपाईंसँग हुन सक्ने कुनै प्रश्नहरूको जवाफ दिन वा कुनै सरोकार सम्बोधन गर्न त्यहाँ छन्।
Telehealth ले मलाई कति खर्च गर्नेछ?
Tehehealth तपाईंको गर्भपात देखभाल अपोइन्टमेन्टको एक समावेश गरिएको घटक हो र त्यहाँ कुनै अतिरिक्त शुल्क छैन। तपाईंको Telehealth अपोइन्टमेन्टमा, तथापि, हामी $ १०० को भुक्तानी अनुरोध गर्दछौं जुन तपाईंको गर्भपतन अपोइन्टमेन्टको लागतमा लागू हुन्छ। जब तपाईं Telehealth अपोइन्टमेन्टको लागि doxy.me पहुँच गर्नुहुन्छ, तपाईंको बिरामी शिक्षकले १०० डलरको लागि तपाईंको क्रेडिट / डेबिट कार्ड जानकारीको लागि प्रोम्टिंग सन्देश पठाउनेछ। (भुक्तानी प्रशोधन स्ट्रिप, एक विश्वासिलो र प्रसिद्ध भुक्तानी प्रोसेसर द्वारा ह्यान्डल गरिएको छ। क्रेडिट कार्ड जानकारी फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टर वा डोक्सी.मे. द्वारा ह्यान्डल हुँदैन।)
यदि तपाईं निजी बीमा प्रयोग गरेर तपाईंको गर्भपतन अपोइन्टमेन्टको लागि भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई टेलहिल अपोइन्टमेन्टको समयमा संकलन गर्न सोध्ने कुनै पनि कोपे वा सह-बीमा छ भने सल्लाह दिन्छौं।
मैले मेरो टेलिल्थ अपोइन्टमेन्टको लागि कसरी तयारी गर्ने?
पहिलो, एक नियुक्ति अनुरोध गर्नुहोस् अनलाइन एक बिरामी शिक्षक एक ईमेल वा तपाइँ चाहानुहुन्छ एक पटक मा तपाइँको Tehehealth नियुक्ति को समय तालिका को लागी कल हुनेछ। तपाईं एक ईमेल र पाठ पुष्टिकरण प्राप्त गर्नुहुनेछ।
तपाईंले आफ्नो नियुक्ति अनुरोध गर्ने बित्तिकै, कृपया तपाईंको पूरा गर्नुहोस् बिरामी जानकारी अनलाइन फार्म. हामी हाम्रो बिरामी शिक्षकहरूलाई तपाईंको मेडिकल ईतिहास समीक्षा गर्नका लागि पर्याप्त समय दिन चाहन्छौं र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै आवश्यक कागजातहरू क्रमबद्ध छन्।
हाम्रो वेबसाइट मा जानकारी को माध्यम बाट पढ्नुहोस् बारेमा औषधि गर्भपतन र प्रक्रियात्मक गर्भपात। तपाईंसँग कुनै पनि प्रश्नहरू सोच्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
एउटा ठाउँ छान्नुहोस् जहाँ तपाईं सहज महसुस गर्नुहुन्छ र स्वतन्त्र कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं एक समर्थन व्यक्ति तपाईं त्यहाँ हुन चाहनुहुन्छ भने, यो ठीक छ।
तपाईंको नियुक्ति भन्दा पाँच मिनेट पहिले, प्रदान गरिएको लिंकको प्रयोग गरेर टेलिहेल्थ सत्रमा लग इन गर्नुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको नाम प्रविष्ट गर्नुहोस् जस्तो कि यसले तपाईंको बिरामी सूचना फारमहरूमा देखाउँदछ।
क्रेडिट / डेबिट कार्ड तयार छ त्यसोभए तपाईंले आफ्नो गर्भपतन हेरचाहको लागि लागू हुने $ १०० भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ।
के Telehealth सुरक्षित र निजी छ?
हो। फल्स चर्च हेल्थकेयर सेन्टरले हाम्रो बिरामीहरूको गोपनीयतालाई गम्भीरताका साथ लिन्छ। यो एउटा कारण हो जुन हामीले doxy.me लाई हाम्रो Telehealth प्लेटफर्मको रूपमा छनौट गरेका छौ - किनकि तिनीहरू HIPAA को अनुपालन र अन्य गोपनीयता र सुरक्षा मापदण्डहरूका लागि सुरक्षा मापदण्डको लागि प्रसिद्ध छन्।
तपाईंको Telehealth सत्र हो इन्क्रिप्टेड अन्त-देखि-अन्त - यसको मतलब सत्रमा सुन्न वा बचत गर्न बीचमा कुनै सर्भर छैन।
थप जानकारीको लागि, doxy.me सँग पृष्ठ छ तिनीहरूको सुरक्षा र गोपनीयता कार्यान्वयनको बारेमा विवरण.
के म मेरो एन्ड्रोइड फोन / आईफोनमा टेलिहेल्थ पहुँच गर्न सक्छु?
हो! अनलाइन प्लेटफर्म जुन हामी टेलिहेल्थका लागि प्रयोग गर्दैछौं doxy.me (विश्वव्यापी २००,००० भन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू द्वारा प्रयोग गरिएको), र यो स्मार्टफोनको साथ साथै विन्डोज, म्याक र क्रोमबुक कम्प्युटरहरू र केही ट्याब्लेटहरूमा वेब ब्राउजर मार्फत पहुँच गर्न सकिन्छ। अधिक विस्तृत प्राविधिक आवश्यकताहरूको लागि तल हेर्नुहोस्।
Telehealth प्रयोग गर्न मलाई कुन उपकरण चाहिन्छ?
अनलाइन प्लेटफर्म जुन हामी टेलिहेल्थका लागि प्रयोग गर्दैछौं doxy.me (विश्वव्यापी २००,००० भन्दा बढि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू द्वारा प्रयोग गरिएको), र यो न्यूनतम प्रणाली आवश्यकताहरू सहित धेरै बिभिन्न उपकरणहरूमा प्रयोग गर्नको लागि डिजाइन गरिएको थियो:
विन्डोज / म्याक / क्रोमबुक: तपाईलाई अडियो (माइक्रोफोन, स्पिकर वा हेडफोन), भिडियो (वेबक्याम), निम्न ब्राउजरहरूमध्ये एउटा: गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स, माइक्रोसफ्ट एज वा सफारी ११+ (भर्खरको संस्करण), र एक ठोस इन्टरनेट जडानको साथ कम्प्यूटर चाहिन्छ। (त्यहाँ अधिक विवरणहरू छन् doxy.me को सिस्टम आवश्यकता पृष्ठ.)
आईओएस र एन्ड्रोइड: सफारी ११+ iOS को नयाँ संस्करणमा; एन्ड्रोइडमा गुगल क्रोम। तपाईलाई कि त वाइफाइ वा डाटा योजना चाहिन्छ।
doxy.me यस समयमा अमेजन किन्डल वा अन्य ई-पाठकहरूको साथ काम गर्दैन।
त्यहाँ उपकरणहरू उपलब्ध छन् तपाईंको नेटवर्क जडान जाँच्नुहोस् निश्चित गर्न कि यसले doxy.me सफलतापूर्वक ह्यान्डल गर्नेछ।
म यसको सट्टामा फोनमा कुरा गरेर मेरो टेलिल्थ भेट्न सक्छु?
हामी हाम्रो टेलिहेल्थ सेसनहरूको लागि doxy.me प्रयोग गर्न चाहान्छौं क्रममा हाम्रा बिरामीहरू र शिक्षकहरूका लागि बोल्दा एक अर्कालाई हेर्न, साथै स्क्रिनमा महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा गर्न।
यदि तपाईंसँग उपयुक्त कम्प्युटर वा स्मार्टफोन छैन, वा तपाईं फोन कल मार्फत आफ्नो टेलिहेल्थ सेसन सञ्चालन गर्न रुचाउनुहुन्छ भने, कृपया यो संकेत गर्नुहोस् जब तपाईं एक नियुक्ति अनुरोध गर्नुहोस् वा हामीलाई 703०532-2500२-XNUMX-२XNUMX at मा कल गर्नुहोस् र हामी तपाईंसँग हामीसँग जडान हुन समाधानमा कार्य गर्नेछौं।
म व्यक्तिमा बिरामी शिक्षकसँग कुरा गर्न बढी सहज महसुस गर्छु।
त्यो पूर्ण रूपमा ठीक छ। हाम्रा केही बिरामीहरू बरु हाम्रो केन्द्रमा भेट्ने थिए। जब तिमी एक नियुक्ति अनुरोध गर्नुहोस्, छनौट गर्न निश्चित गर्नुहोस् "म मेरो ब्यक्तिगत शिक्षा सत्र मेरो व्यक्तिगतमा भेट्न चाहन्छु।" हामी तपाईंको व्यक्तिगत-अपोइन्टमेन्ट कार्यक्रमको लागि काम गर्नेछौं, र तपाईंको बिरामी शिक्षा समावेश हुनेछ। कृपया सचेत रहनुहोस् कि तपाईंको नियुक्ति सम्भवतः लगभग हुनेछ Minutes मिनेट अब जब बिरामी शिक्षा हाम्रो केन्द्र मा भइरहेको छ।